China Fuel Tanker API Camlock Coupling Adapter orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Jiasheng
Adaptatera API Gravity Drop dia natao manokana ho an'ny valizy API sy mpampitohy,
Ny famolavolana zoro miavaka dia mety amin'ny famoahana ny hery misintona mba hahatonga ny famoahana ho madio kokoa sy haingana kokoa, afaka miaro ny fantsona malefaka tsy hiondrika koa izy rehefa mamoaka.
Ny valindrihana vehivavy sy valizy solika solika dia mifanaraka amin'ny fenitry ny API Rp 1004. Afaka mifandray amin'ny mpandrindra API mahazatra izy io. Miaraka amin'ny fitsaboana oksidasian'ny tany sy ny Stainless Steel, ny fanoherana ny harafesina avo, matevina ary maharitra.
Anaran'ny vokatra Adaptatera API Stainless Steel avo lenta
Material vatana Inôksa
Tempreture: -150 ° F hatramin'ny + 250 ° F
Medium: lasantsy, solitany, Diesel, rano, sns
API adapter coupler no endrika tsara indrindra ho an'ny adapter ambany API hiantohana ny fiarovana sy ny fandefasana ary ny famoahana haingana. Izy io dia namboarina tamin'ny 'molotra' anatiny izay nanamora ny fifandraisana. Mates miaraka amina adaptatera kamiaobe 4 ″ API RP-1004.
Raha apetraka hanao ny fanarenana ny etona dia misy habe telo (2.5 ″ 3 ″ 4 to) hanomezana fahafaham-po ireo safidy isan-karazany. Mety ho mora ny famolavolana mpaminany raha manokatra ny Valve adaptatera etona. ny Valve adaptatera etona.
Camlock coupler dia manatsara ny fahombiazany rehefa mampidina solika avy amin'ny tanker. Ny endrika tsy manam-paharoa dia mety amin'ny famoahana mba hahatonga ny fanalana entana ho madio kokoa sy haingana kokoa. Arovy tsara ny fantsona tsy hiondrika. Ny interface vehivavy-Coupler dia mifanaraka amin'ny takiana API RP1004, azo ampifandraisina amin'ny API Coupler mahazatra.
1.Gravity Drop mpivady
Ny Gravity Drop Coupler dia manatsara ny fahombiazany rehefa manao ny asa famoahana entana. Ny famolavolana zoro oblique dia mety amin'ny famoahana hery misintona mba hahatonga ny fanalana entana ho madio kokoa sy haingana kokoa. Arovy tsara ny fantsona tsy hiondrika rehefa alefa. Ny interface vehivavy-Coupler dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana API RP1004, azo ampifandraisina amin'ny API Coupler mahazatra.
2. Tombony sy fampiasa
* Fitsaboana mafy: ny vatan'ny valizy iray manontolo dia nolalovana tamin'ny fomba fanamafisana manokana hanatsarana ny fiainam-panompoany.
* Famolavolana mety: Ny famolavolana zoro misavoana dia mety amin'ny famoahana ny hery misintona ary miaro tsara ireo fantsom-panafahana.
* Habe namboarina: ny refy Interface dia natao araka ny fenitra API RP1004, miantsona miaraka amin'ny mpampitohy API mahazatra.
* Mavesatra maivana: vita amin'ny firaka aliminioma ny tena vatana, maivana sy matanjaka kokoa izy io.
* Firafitra alimina alimina aliminioma, fitsaboana anodized.
* Fandidiana fanidiana cam, napetraky ny gazety.
* Ny zoro 22.5 mankany ambany dia mampihena ny fihazonana solika.
* Tanana voafaritra manokana mankany amin'ny fanidiana no mahatonga ny fifandraisana mora kokoa sy ny famehezana azo antoka kokoa.
* Ny cam sy ny mitsingevana maimaim-poana dia manala ny fikororohana sy ny fikororohana, mora ny mifandray tsy misy menaka.
* Mora ny manamarina ny fikorianan'ny fitaratra fahitana.
* Ampiasaina amin'ny sambo tanker maro, misaraka ary mampidina entana ho an'ny solika samihafa.
* Mihaona amin'ny fenitra API1004.
Material vatana aluminium
Fomba fiasa Mechanical
famaritana 4 × 2,5 santimetatra, 4 × 3 santimetatra, 4 × 4 santimetatra
Medium: Lasantsy, Kerosène, Diesel
ny endrika tsara indrindra ho an'ny adapter ambany API hiantohana ny fiarovana sy ny fandefasana ary ny famoahana haingana. Izy io dia namboarina tamin'ny 'molotra' anatiny izay nanamora ny fifandraisana. Mates misy adaptatera tanky 4 ″ API BR-1004.
Pin: vy vy
1. Firafitra alimina alimina aliminioma, fitsaboana anodized.
2. Miasa ny fanidiana cam, napetraka amin'ny alàlan'ny gazety.
3. 22.5 zoro midina mampihena ny fihazonana menaka.
4. Ny famolavolana manokana mankany amin'ny fanidiana dia mahatonga fifandraisana mora kokoa sy famehezana azo antoka kokoa.
5. Ny cam sy ny mitsingevana maimaim-poana dia manala ny fikororohana sy ny famolahana, mora ny mifandray tsy misy menaka.
6. Mora ny manamarina ny fizotran'ilay vera fahitana lamellar.
8. Mihaona amin'ny fenitra API1004.
Size: 4 * 4, 4 * 3, 4 * 2.5
Fomba fiasa: Mechanical
Fanerena miasa: 0.6MPa
Temperature range: -20 ~ + 70 ℃
Previous: Coupler fanarenana etona
Manaraka: Valizy Adapter API Frence